antivirus Malware နဲ့ဖယ်ရှားရေးအခမဲ့ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » antivirus Malware နဲ့ဖယ်ရှားရေးအခမဲ့
antivirus Malware နဲ့ဖယ်ရှားရေးအခမဲ့ APK ကို
မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် antivirus ကိုများအတွက်လျှောက်လွှာလုံးဝအခမဲ့နှင့်ကမ္ဘာအများအပြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကို malware detection စနစ်, spyware တွေရဲ့ဖယ်ရှားရေး, Android အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး, Anti-malware နဲ့ spyware နဲ့ adware သန့်စင်ခြင်းနှင့်ကင်နာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာဝက်ဘ်, access ကိုလူမှုကွန်ယက်များ, နှင့်သန့်ရှင်းသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုရယူရန်နိုင်ပါတယ် * အထူးအမှုအရာသည် Android အဘို့ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကင်နာများနှင့် remover ကိုသင်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ :
✔ Fast နှင့်အဆင်ပြေ။ ကိုယ်ကသာ Android ဖုန်းများအတွက်ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ပစ်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာ
✔ Android ဖုန်းတွေအတွက် Antivirus ကိုအခမဲ့ download
Friendly ✔။ ဤလှပသော interface ကိုအတူလူတိုင်းအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူ secore adware သန့်စင်ခြင်းနှင့် antivirus ကိုတစ်ခု application ဖြစ်ပါတယ်
✔နောက်ဆုံးသတင်းများ။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူကျနော်တို့ကအမြဲနီးပါး 1,000 malware များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နေ့စဉ်တွေ့ရှိ
မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး antivirus ကိုများအတွက်လျှောက်လွှာအွန်လိုင်းအန္တရာယ်မှထုတ်ကုန်သန်းပေါင်းများစွာ protected သိရသည်။ ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ malware ကို app နဲ့အတှေ့အကွုံ4အဆင့်ကိုယနေ့ delete ကို download လုပ်ပါစို့:
1 - မိုဘိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ device ကိုကာကွယ်ပါ
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကာလ၌ခြိမ်းခြောက်မှုများကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ scan နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်မည်။ အဆိုပါ application ကိုအော်တိုဗိုင်းရပ်စ် antivirus ကိုစကင်နာဂိမ်းနှင့်ဖိုင်များဖျက်ခြင်းနှင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အကြောင်းအရာ delete ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အန္တရာယ်ရှိလင့်များ filter ပါလိမ့်မယ်
2 - Antivirus ကိုထောက်လှမ်းနှင့်ဖုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သန့်စင်
antivirus ကိုနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများကတီထွင်နေသည်ကျော် 1 သန်းက Android malware များနှင့်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မိုဘိုင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏အကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်စေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ application ကိုသင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်မှာရှိသမျှ Trojans မျိုးစနစ်အားနည်းချက်များ, malware, spyware, adware, spam, ဟက်ကာများရှာပြီးသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် malware ကိုစကင်နာများနှင့်သန့်စင်ဘို့လျှောက်လွှာလည်းထိုကဲ့သို့သော antivirus ကိုအာနိသင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သန့်စင်သို့မဟုတ် antivirus ကိုမြန်နှုန်းမြှင့်အဖြစ်နောက်ထပ် features တွေပေါင်းစပ်ထားသည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုပိုကောင်းတဲ့ malware များဖယ်ရှားရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအပြည့်အဝဗိုင်းရပ်စ် detector နဲ့ remover များအတွက်လျှောက်လွှာများအတွက် optimized လိမ့်မည်။
3 - သင့် wifi ရဲ့ connection ကို, အမြန်နှုန်းနှင့်ပိုပြီး Check ...
ဤလျှောက်လွှာကိုအများပြည်သူ Wi-Fi ကနေပြဿနာတွေ, စကားဝှက်နှင့်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများ coding detect လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ Wi-Fi network ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကူညီ
4 - သင့်ရဲ့ privacy ကာကွယ်ပါနှင့်လုံခြုံသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစောင့်ရှောက်
ဘေးကင်းလုံခြုံသင့်ရဲ့ဒေတာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံသောကွောငျ့သင်တို့သည်နောက်တဖန်သူတို့၏ဖုန်းသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အထိခိုက်မခံဒေတာ်ပလီကေးရှင်းကို lock သို့မဟုတ် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကို lock လိမ့်မယ်
အလိုအလျောက်ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာကို Android 4.0 အပေါင်းတို့နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဖုန်း & tablet များထောက်ပံ့သည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲရှာတွေ့ခြင်းနှင့်မကြာခဏသင့်ရဲ့ဖုန်းကအမြဲတမ်းအသစ်က malware ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှကာကွယ်လိမ့်ကြောင်းသေချာစေရန် update လုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။
အန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး Anti-virus ကာကွယ်မှုရရှိရန်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ လာ. ကွ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်လူသတ်သမား application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်တှနျ့ဆုတျပါဘူး။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါကကျနော်တို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တုံ့ပြန်မည်အောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်ပေးပါ။ သင်တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်စစ်အဘို့ဤလျှောက်လွှာကိုချစ်ကြလျှင်ငါးခု * ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေးပါ။
???? အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများများအတွက် antivirus အခမဲ့ download,
???? လူတိုငျးအတှကျအသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်လှပသော interface ကိုအတူဖော်ရွေ။
???? bug ကို fix ။
antivirus Malware နဲ့ဖယ်ရှားရေးအခမဲ့
8.08 ကို MB
LHC Lab က